पहिलो फाइबर मज्जा "Lyocell" भनिन्छ नैनो को प्रयोग, संग प्राप्त। कम्पनी Lenzing, "ortsel" - - VNIIIPV (रूस) Tencel रूपमा प्राप्त गर्न यसको व्यावसायिक नाम।
बेलायत मा 1988 मा पहिलो पटक लागि कपडा गरिएको थियो। हाल, Tencel संयुक्त राज्य अमेरिका (मोबाइल, अलबामा, कम्पनी Lenzing एजी), बेलायतमा (Grimsby), अस्ट्रिया मा (Heiligenkreuz, Burgenland) मा उत्पादन गरिएको छ।
Tencel बनाइएका कपडे प्राकृतिक फाइबर देखि प्राकृतिक कपडे एउटा गम्भीर प्रतियोगिता गठन। गुणहरू मा उनि निम्न लाभ छ।
- नरम, शरीर राम्रो उपयुक्त;
- गीला र सुक्खा रूपमा, बिच्छेद विषय छैन;
- लोच र कपास को चिस्यान अवशोषण मा उच्च;
- crumple छैन;
- तिनीहरूले हात वा मिसिन मा धोए गर्न सकिन्छ;
- यसको सबै गुण सफाई पछि रहने;
- राम्रो उत्पादन प्रक्रियामा चित्रित;
साबर, छाला, र रेशम: राम्रो प्राकृतिक सामाग्री को बनावट नकल। उत्पादन प्रक्रियामा Tencel विभिन्न तरिकामा उपचार। उदाहरणका लागि, कपास फाइबर, ऊन, सिल्क, Viscose, सन, नायलन, पलिएस्टर को संयुक्त यार्न। शायद, यो शुद्ध Tencel को मुद्दा स्पिन गर्न सम्भव छ, तर लामो यो एक धेरै महंगा सामाग्री छ रूपमा।
1 Tencel - सेलूलोज फाइबर को बलियो कपडा छ। यो कपास र सनी भन्दा बलियो छ।
2. Tencel - चमक, उत्कृष्ट ढांकना एक कपडा।
कारण यो फिलामेंट्स एक कृत्रिम फाइबर व्यास र लम्बाइ उत्पादन समयमा अंतर रहन्थ्यो हुन सक्छ छ भन्ने तथ्यलाई 3.। यो पातलो कपडा व्यापक टेक्सटाइल उद्योग मा प्रयोग गरिन्छ।
4 यो यो कपास या सनी जस्तै crumple छैन, एक मध्यम लोच छ।
5 वस्त्र यो कपडा बनेको लागि धुने एउटा सानो दबाव द्वारा विशेषता छ।
6 Tencel - hypoallergenic यो वातावरण मैत्री छ, किनभने कुनै हानिकारक रसायन, फाइबर, चिल्लो, छाला चोट लाग्नु छैन एक कपडा। सुक्खा छाला संग मान्छे को लागि उपयुक्त र dermatitis झुकाउ।
7 स्वच्छता। जो बाट Tencel बनाउन मसलाको, निको र जीवाणुरोधी गुण छ। Tencel - सबैभन्दा उपयुक्त बिस्तर लागि कपडा।
8 एयर permeability र absorbability। Tencel राम्रो हावा (साँस), hygroscopicity र पानी कपास, रेशम भन्दा राम्रो yielding गर्न अनुमति दिन्छ। राम्रो चिस्यान स्थानान्तरण शरीर सुख्खा रहन अनुमति दिन्छ। उत्पादन पनि धेरै cleanings पछि राम्रो दृश्य राख्ने।
अभ्यास शो रूपमा, Tencel उत्पादन कपास वा Viscose भन्दा अधिक महंगा छ। शैवाल, घ्यु, चाँदी आयनों: कपडे गर्न विभिन्न additives गुणस्तर सुधार गर्न प्रयोग। फलस्वरूप, यो धेरै लाभदायक गुण संग एक उत्कृष्ट Tencel बहुमुखी फाइबर हुन्छ।
कपडा को बजार मा लोकप्रिय र मांग छ। यसलाई व्यापक ओछ्यान तन्ना लागि कपडा यस्ता जिन्स, अंडरवियर, खेल पोशाक धेरै दैनिक उद्देश्य र लुगा, लागि प्रयोग गरिन्छ।
Tencel बच्चाहरु, ड्रेसिङ लागि कन्वेयर बेल्ट, विशेष पेपर, पट्टियां र डायपर को उत्पादन मा प्रयोग गरिन्छ। हालैका वर्षहरूमा उत्पादन अन्य देशहरूमा सार्न झुकाव छ। कपडे आपूर्तिकर्ता सुदूर पूर्व, इटाली, पोर्चुगल, टर्की, र भारत छन्।
चौथो पुस्ता रूसी को आणविक पनडुब्बी जहाजहरू के हुनेछ
एक आणविक पावर प्लान्ट Rostov (Volgodonsk) कसरी निर्माण गर्ने? एकाइहरूको संख्या र कमीशन को मिति
Tomino मेरो - यो के हो? को चेल्याबिन्स्क क्षेत्रमा खानी र प्रशोधन कारखाना
नवीनतम रूसी ट्यांक - Armored वाहन को निर्माण मा एक क्रान्तिको
Biserovsky rybokombinat: शुल्क माछा मार्ने, सेवा, प्रशंसापत्र र सम्पर्क
घन प्रेस कसरी निर्माण गर्न। घर मा जटिल अभ्यास
पानीमा सुरक्षा: यति समस्यामा पर्दैन!
जादुई छुट्टी - इवान Kupala दिन
अन्डा बिना दलिया कुकीहरू: नुस्खा
विभिन्न परिस्थितिमा कार कसरी सुरु गर्न
कार्यक्रम, योजना, वर्णन र समीक्षा: स्कूलमा थिएटर कार्यशाला